बिजय शाहीलाई के भयो.. रुदै भाग्य न्यौपाने भेटन किन गए हेर्नुहोस (भिडियो) – Jagaran Nepal
काठमाडौं साउन / तीस सेकेण्डमा एक सयभन्दा बढी शब्द सम्झेर कालिकोटका १९ वर्षीय विजय शाही अहिले चर्चामा छन् । उनलाई तेजस्मरणशक्ति भएका विश्वका कीर्तिमानी मानिएको छ ।उनी कालिकोटका स्थानिय युवा हुन् । उनले ३० सेकेण्डमा १ सय भन्दा बढी शब्द सम्झेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।
विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि शाहीलाई अहिले अन्तरवार्ता दिन भ्याइ नभ्याई छ । उनले एउटा निकै ठूलो किताव सररर हेर्छन् त्यसपछि त्यो किताब बन्द गरेर त्यसमा भएका शब्द उत्तिखेरै सुनाउन र लेखेर देखाउन सक्छन् । भिडियो
“खानाको अभावमा मृत्यु कुरिरहेका यि दम्पती” हात जोडेर आँशु खसाल्दै सबैलाई सहयोग गर्न अपिल!! व्यवस्था बदल्न गएका नेतालाई व्यवस्थाले स्वयमलाई बदलेपछि यस्ता पिडासँग कहिलेसम्म बाच्नुपर्ने हाे कुन्नि ! नयाँ नेपालमा । रुकुम पश्चिम ,सानिभेरी गाउँपालिका वार्ड न.11 रोकाडेरा निवासी साहार बिहिन यि दुई दम्पती को बारेमा हजुरहरुले भिडियो हेरेर धेरै कुरा देखिसक्नु भयो होला।म धेरै शब्द मा के लेखौ।यदि तपाईलाई उहाँहरु लाई सहयोग गर्न मन छ र हजुर ले 1/2 छाक आफ्नो ईच्छा ले जति सहयोग गर्न मन लाग्छ गर्नुहोला।सहयोग को लागी” नाम =बिर्ख ब. ओलि ,भान्जा,(IME)को लागी सिर्जना ओलि : खाता नम्बर =3607010007026 भिडियो हेर्नुहोस्;